WTTC: Chikamu chekushanya nekushanya muFrance chakagadzirira kudzoreredza chinopfuura chetatu gore rino
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » WTTC: Chikamu chekushanya nekushanya muFrance chakagadzirira kudzoreredza chinopfuura chetatu gore rino
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Kurwisa • France Kuputsa Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • Theme Parks • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
WTTC: Chikamu chekushanya nekushanya muFrance chakagadzirira kudzoreredza chinopfuura chetatu gore rino.
WTTC inoti kukura kwechikamu ichi gore rino kuchakwira pamberi pekupora kweEurope pa23.9%, uye kupora kwepasirese pa30.7%.
France inotarisirwa kudzoreredza chikamu cheKufamba uye Tourism pamberi peUK neEurope.
Kana matanho akakosha akateverwa, Kufamba & Tourism chikamu chaigona kuona nhamba dzebasa dzichipfuura pre-denda panosvika 2022.
Muna 2019, chikamu cheFrance's Travel & Tourism chikamu cheGDP chakamiririra € 211 bhiriyoni (8.5% yehupfumi hwenyika).
Tsvakurudzo itsva kubva ku World Kufamba & Yekushanya Kanzuru (WTTC) inoratidza kuti kudzoreredza kweFrance's Travel & Tourism sector kunogona kuwedzera kukura kwe34.9% gore rino.
Nhau dzinouya pazuva iro WTTC, iyo inomiririra yepasi rose Yekufamba & Tourism chikamu, Nhengo dzayo, uye vatungamiriri vebhizinesi kubva pasirese, vakananga kuParis kumusangano weDestination France.
Yakarongwa neMutungamiri Emmanuel Macron uye nehurukuro yekuvhura kubva WTTC Sachigaro neMutungamiriri & Mukuru weCarnival Corporation & plc, Arnold W. Donald, chiitiko ichi chichatarisa kutyaira vafambi kudzokera kunzvimbo iyo denda risati rasvika, yaive nzvimbo yakakurumbira pasi rose.
In 2019, FuranziMupiro wechikamu cheKushanya nekushanya kuGDP wakamiririra €211 bhiriyoni (8.5% yehupfumi hwenyika).
Muna 2020, denda parakamisa kufamba kwenyika dzese, mupiro wechikamu cheTravel & Tourism wakadonha kusvika pamabhiriyoni zana nemazana masere emadhora (108% yehupfumi hwenyika).
Nekudaro, maererano netsvagiridzo yazvino, pachiyero chazvino chekupora, Furanzi's Travel & Tourism sector inogona kutarisira gore negore kukura kweinenge 35%, inomiririra kuwedzera kwe38 bhiriyoni.
Iyo data zvakare inoratidza kuti nyika inogona kuona gore negore kuwedzera kwe21.8% muna 2022, zvichibatsira kuwedzera hupfumi hwe32 bhiriyoni.
Boka rekushanya kwepasi rose rinoti kunyangwe kukwira kwekufamba mudzimba kwapa zororo kurudzi, hazvina kukwana kuwana kudzoreredzwa kuzere kunodiwa kuponesa hupfumi hwayo uye mamirioni emabasa akarasika nekuda kweCOVID-19 denda.